BAYDHABO, Soomaaliya - Shirkii Gollaha Amniga Qaranka ee labadii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Baydhabo ayaa lasoo gaba-gabeeyay, iyadoo laga soo saarey War-murtiyeed lagu shaaciyay qodobadii lagu heshiiyay.
Kulankan oo uu shir gudoomiyey Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa ka qqeybgalay Ra'iisul Wasaare Khayre, madaxda maamul goboleedyada, Duqa Muqdisho, waxaana diiradda lagu saarey arrimaha xasaasi ah.
Intii uu socday Shirka, waxaa aad loogu gorfeeyay arrimaha Amniga, Wadaagga Khayraadka, Doorashada 2020, isku dhafka iyo tayeyta Ciidamada xoogga dalka.
Shirkaan ayaa ah midkii 7aad oo ay yeeshaan Gollaha Amniga Qaranka oo la aas-aasey April 2017, waxaana hadda hogaamiyaasha dalka ay doonayaan in heshiis kama dambeys ah laga gaaro qodobadii horey looga hadlay.
Qeybsiga Khayraadka, Amniga iyo Nooca doorasho ee dalka ka dhici doonto 2020 ayaa ah arrimaha ugu muhiimsan, ee looga hadlayay dhamaan shirarkii dhacay.
Filo War-murtiyeedka goordhaw.
Farmajo oo gaarey Baydhabo, ajandooyinka Shirka
Soomaliya 03.06.2018. 15:34